Kuzoba kanjani ezokuhamba zomphakathi e-Ankara izinsuku ezi-4? | RayHaber | raillynews
IkhayaTURKEYIsifunda sase-Central AnatoliaI-06 AnkaraKuzoba kanjani ezokuThutha koMphakathi e-Ankara izinsuku ezi-4?
22 / 05 / 2020 I-06 Ankara, Isifunda sase-Central Anatolia, sesitimela, JIKELELE, KENTİÇİ Rail Systems, HEADLINE, Metro, TURKEY
Kuzoba kanjani ukuthutha ngobuningi e-Ankara phakathi nosuku
Ngokuya ngezinyathelo okumele zithathwe mayelana nobhubhane lwe-coronavirus (Covid-19), isikhathi okufanele sibekelwe sona sizoqala ukusebenza ngomhlaka 23-26 Meyi 2020, ngokwesinqumo se-ANKARA GOVERNOR'S UMUMI HIFZISSIHHA BOARD, sango-21.05.2020 futhi sinombolo 2020/37, ngamabhasi e-EGO General Directorate. Phakathi kwamahora we-23-2020 ngoMgqibelo, 07.00 Meyi 20.00, okuwusuku lwesonto; Ngosuku lokuqala, lwesibili nolwesithathu lomkhosi weRamadan, 24-25-26 Meyi 2020, abasebenzi bethu bezokunakekelwa kwempilo kanye nezinye izakhamizi ezikhishwe ezindlini ezibandayo phakathi kwe-07.00-09.00 kanye ne-16.30-20.00 zizonikezwa.
Ngaphezu kwalokho, ukushintsha izikhathi zokuhamba nemizila yamabhasi we-EGO, aqhubeka nokusebenzela imigqa engama-440 ekusebenzeni, kubuyekeziwe ngaphakathi kwesilinganiso se-KARAR. Ukuvuselelwa kuyatholakala kuhlelo lokusebenza leselula le-EGO CEP kuwebhusayithi ye-Corporation yethu (www.ego.gov.t kuyinto) esigabeni "se-TRANSPORTATION EDolobheni / Uhlelo Lolwazi leWebhu".
Kodwa-ke, ngenxa yoMkhosi “weRamadan” phakathi kuka-24-25- 26 Meyi 2020, kuzosetshenziswa isikhathi sokufika ekhaya, kusukela ngo-06.00 kuze kube ngu-24.00 ngezinsuku zamaholide ezenkolo nezikazwelonke kuze kube nokhetho "lokuQalwa kokuLawulwa kwasekhaya" oluthathwe nguMkhandlu kaMasipala wase-Ankara. Ukusetshenziswa kwamahhala kwe-Ego General Directorate kwezinsizakalo zokuhamba zomphakathi ezinikezwe ngamabhasi, ngojantshi nezimoto zamakhebula… ”Ngokuya ngesinqumo, izakhamizi zethu ezikhishwe ekuphumeni ngosuku olushiwo ngenhla zizokwazi ukuzuza kumabhasi e-EGO azosebenza phakathi kuka-07.00-09.00 no-16.30-20.00 ngesikhathi soMkhosi kaRamadan.
I-ANKARAY neMetro zizovalwa phakathi nezinsuku lapho kuzosetshenziswa isikhathi sokufika ekhaya.
Izikhathi zokuhamba kwesitimela zokugcina zika-M22, M2020, M1 kanye no-M2 ngolwesihlanu, Meyi 3, 4 zinikezwe ngezansi.
amahora angaphansi komhlaba
Uhambo lokugcina e-ANKARAY luhlelelwe ukusuka eDikimevi nase-AŞTİ ngo-22.20: XNUMX. Amabhasi azoqedela izinsizakalo zawo zokugcina ngemuva kokuthi metro ithathe abagibeli bokugcina.
Kuzoba kanjani e-Istanbul izinsuku ezi-4? I-Metro Metrobus neSteamboats…
Ukuthutha kuzoba mahhala ngesikhathi samaholide e-Ankara
Ungakuthola Kanjani Ukuthuthwa Komphakathi ku-Isonto I-Curfew e-Izmir
EzokuThutha Komphakathi Ziyoba Kanjani Ngempela-sonto e-Izmir?
Lizoba kanjani lelo zindawo zokuhamba zomphakathi ngemuva kwe-coronavirus?
EzokuThutha Komphakathi Ziyoba Kanjani Ngempela-sonto e-Izmir? Ngabe u-İZBAN Uzokhonza?
Amashejuli kamasipala we-Ankara
I-Marmaray 180 izoba yindawo entsha yokuhanjiswa kwe-Istanbul
Ukuthutha Komphakathi Phakathi neBraram e-Izmir Free
I-TCDD Isixwayisa Ngemizila Yokufafaza! Ungasondeli Izinsuku eziyi-10